Kuboshwe obehlele eyabebemashela umalugaju - Ilanga News
Home Izindaba Kuboshwe obehlele eyabebemashela umalugaju
ubizelwe esiteshini samaphoyisa okuyilapho zimkhalele khona
ophethe umbhombho nguNkz Hlengiwe Gambushe ogcine ngokuboshwa emuva kokuba amaphoyisa acela ukunikwa isikhathi sokuphendula emhlanganweni obuhlelelwe uLwesibili.
UYAVEVA yintukuthelo umphakathi waseNkambeni naseMnasu,
eMthwalume ngokucushelwa umgoga kuboshwe owesifazane oyingxenye yabebehlele umbhikisho obungoMgqibelo wokukhononda ngokubulawa kwabesifazane kule ndawo kodwa kungaboshwa muntu.
Lo mphakathi obekungabesifazane bodwa uqome ukungena emgwaqweni wahambisa izikhalo emaphoyiseni njengoba ukhala ngesiteshi saseHibberdene, uthi abaseshi bakhona bashaya ngolonwabu ekuphenyeni ukuze kuboshwe abasolwa, futhi ufuna no-Ngqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele ukuba angenelele.
Bengakatholakali abasolwa, kuboshwe uNkz Hlengiwe Gambushe ngecala lokususa uthuthuva emphakathini emuva kokuba yena nabanye besifazane behlele lo mbhikisho.
Kuzokhumbuleka ukuthi ILANGA langomhla ka-13-15 ku-Ntulikazi (July) labika ngodaba lokudliwa yingebhe kwalo mphakathi emuva kokutholakala kwezidumbu zamantombazane asendaweni, zidindilize esimobeni ezigamekweni ezahlukene.
Kwabesifazane abatholwa bebulewe umphakathi waze wasola ukuthi ubhekene nomalugaju uqobo nguNkz Baja Duma, uNkz Nosipho Gumede (15), uNkz Akhona Gumede (25) izidumbu zabo ezatholwa zilahlwe ndawonye no-Nkz Nelisiwe Dube (22) owangcwatshwa emasontweni amabili edlule.
Zonke izigameko zokubulawa kwabo ziyefana njengoba bengatshelanga muntu ngesikhathi bephuma emakubo.
ILANGA LangeSonto eliyindodakazi yeLANGA, libikile kuleli Sonto esiphuma kulo ngombhikisho wangoMgqibelo, lapho umphakathi ukhale ngokwehluleka kwamaphoyisa njengoba ziqhubeka izigameko zokubulawa kwabesifazane.
Kulo mbhikisho, amaphoyisa acela ukunikwa isikhathi ukuze ezophendula ngezikhalo ezibekwa wumphakathi. Anquma ukuba kuhlanganwe ngoLwesibili nabaholi bomphakathi, okuhlanganisa ne-Community Policing Forum (CPF).
Kubikwa ukuthi usalinde lokho umphakathi, ngoMsombuluko kujikile ukudla epuletini amaphoyisa ashayela uNkz Gambushe amtshela ukuba afike ngo-6 ekuseni esiteshini saseHibberdene ngaphambi kokuba kuqale umhlangano.
Esefikile esiteshini, kuthiwa amaphoyisa amjikele esiswini njengotshwala, zamkhalela. Lokhu kucasule umphakathi wanikela eNkantolo yeMantshi yaseMthwalume lapho uNkz Gambushe ebevele khona ngoLwesibili.
UMnu Lucky Bhuyeni ongusihlalo weCPF, uthi udumele kakhulu ngesenzo samaphoyisa, kwazise yena ubelindele izimpendulo ngoLwesibili abathenjiswa zona.
Uthi uthole ucingo kumphathi wesiteshi saseHibberdene emtshela ukuthi umhlangano ngeke usaba semahhovisi kamasipala njengoba bebetshelwe ngoMgqibelo ngesikhathi kunombhikisho.
“Ngikhuluma nje, kasazi ukuthi lo mhlangano uzoba nini. Ngesikhathi ngisalinde ukuzwa ukuthi umhlangano uzoba kuphi, ngithole umyalezo wokuthi uHlengiwe useboshiwe okuyinto evele yangidida kakhulu.
“Ukuboshwa kwakhe kusikhombisa ngokusobala ukuthi amaphoyisa kawazimisele ngokusebenzisana nomphakathi ubophe abenzi bobubi.
“Athembisa ukuthi kuzoba neveni ezobonakala kule ndawo ukuqapha isimo, kodwa lokho akwenzekanga, kunalokho kuboshwa abantu abebelwa nokubulawa kwabesifazane,” esho.
Icala likaNkz Gambushe lihlehliselwe umhla ka-21 kuNcwaba (August) wabe esededelwa mahhala.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, ukuqinisekisile ukuboshwa kukaNkz Gambushe, wathi kuvulwe icala lokususa uthuthuva emphakathini.
Imizamo yokuthola uNkz Lirandzu Themba okhulumela uMnu Bheki Cele kayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe belukhala lungaphendulwa kanti nomnyango wezokuPhepha koMphakathi nayo iphunzile njengoba imibuzo ethunyelwe kokhulumela lo mnyango uMnu Kwanele Ncalane kuze kwashaya isikhathi sokushicilela ingaphendulwanga.
Previous articleUkhale ngamakhaza washona “uMgijimi”
Next articleUthi usethukwe kwanele u-Ayanda